Ahoana no hahafantatra ny Ankizivavy iray tany an-Dalambe
Tsara lahatra izy mba ho afaka manomboka miteny, dia tsy maintsy mahita ny lohahevitra iray mba hiresaka, saingy mandritra izany fotoana izany, dia tsy maintsy ho mahaliana ny resaka toy izany fa afaka manohy. Ka raha mahita zazavavy tsara tarehy eny an-dalambe sy ny tsy handeha intsony izany mitranga manana herim-po ary aza avela ho afa-mandositra satria sisa rehetra dia ho very. Dia izany rehetra izany dia miankina amin’ny toetra, tsy maintsy mba hijery raha toa ianao saro-kenatra na brash, fa raha toa ianao saro-kenatra ianao tokoa no tahotra ny fandraisana ny fandavana, ary indrindra hanao ratsy ny olo-malaza fa izany dia noho izany antony izany indrindra dia jereo kely ny fomba hanaovana izany. Voalohany indrindra, dia afaka milaza fa misy ankizivavy izay hahatonga anao hahatakatra avy hatrany raha tiany ianao na tsia, satria raha mijery ianao ka mitsiky ianao, dia midika izany fa ianao no variana, na raha toa ianao mitady zara raha midika hoe ianao efa tsy namely na inona na inona, fa tokony handray ny mety ihany ary angamba hangataka azy noho ny nomeraon-telefaonina raha tianao tokoa izany, mazava ho azy, raha tsy te-doza izany, azonao atao ny mamaky ny vatana teny sy hahatakatra avy hatrany raha ny vehivavy no miahy anareo. Raha te-hahatakatra ny fomba hanaovana izany amin ny Mazava, amin’ny toe-javatra roa ireo, raha toa ianao ka miatrika ny zazavavy miaraka kely ny fo, ianao dia hahatakatra ary angamba dia handao ihany koa ny finday maro mandany ny hariva miaraka. Sahirana ny arabe feno olona sy ny mijery ny manodidina ny fanantenana ny nahita ny vehivavy iray izay tianao, voalohany, dia ny fanafihana ny bokotra, tsy hahita fialan-tsiny-tsy misy dikany izany satria tsy hitondra na inona na inona, fa ianao namana sy miarahaba ny rehetra ary, tahaka ny amin’ny mandrakariva, miezaka ny ho azy, satria raha manao izany ianareo dia ho afaka hanatona ny zazavavy, ka hampiseho foana fa tsy maintsy matoky ny tenanao. Koa, manoro hevitra anareo aho miezaka ny tsy ho loatra pushy, ary ho hitanao fa ny zazavavy dia hanome anao ny mahitsy, fa ny tena zava-dehibe sy ny mba hahatonga izany ho mahafinaritra be dia be, fa mandritra izany fotoana izany, moa ve tsy ho voafitaka be loatra, satria tsy afaka mahazo mandrakariva izay fanantenana ho amin’ny fiainana. Azo antoka fa, raha ny voalohany no tsy miasa, tsy ho kivy satria ny fotoana bebe kokoa isika hiezaka sy ny bebe kokoa ianao, hianatra ny hetsika ho amin’ny fotoana manaraka. Miezaka ny tsy inventarvi tsy mitombina ny zavatra fotsiny ho tsotra sy ny ara-boajanahary, noho ny vavy tia ny olona tampoka sy tsy miomana ny lohahevitra amin’ny tovovavy satria manao fahadisoana lehibe. Ny zava-dehibe mba hamitahany ny ankizivavy eny an-dalambe dia ny fomba amin’ny fomba ianao mametraka ny tenanao ao amin’ny hoe ny zava-drehetra, fa tsy be dia be amin’ny zavatra holazaina, ary noho izany ny ankizivavy jereo indrindra indrindra ny fitondran-tena. Ihany koa, ny fomba tsara mba haka zazavavy dia ny hahazo nahatsikaritra amin’ny akanjo lamaody, fa ny zavatra izay tsy maharary ny manana fiara tsara noho ny vehivavy rehetra te-handeha manodidina amin’ny fiara tsara, ianao koa dia mila hitondra ny endrika ara-batana ary tsy ho misavoritaka satria ny zavatra voalohany izay mamely anao rehefa manatona ny ankizivavy any an-dalana dia ny endrika ivelany fa ny malaza hoe milaza, na dia te-maso ny ampahany. Maro ny olona dia mety mahita fa sarotra ny fomba ny vehivavy na tovovavy eny imasom-bahoaka. Indraindray izany dia saro-kenatra, ny hafa, Voalohany indrindra, te hilaza aminao ny zava-miafina izay am-fototry ny tsirairay manatona, fa ny ambonin’ny zava-drehetra, izay isika dia miresaka momba ity raharaha ity: raha mandoa ny saina, ianao dia tsy misy antony matahotra ny hanao diso, hanaitaitra azy, na manatona azy diso. Noho izany, eo amin’ny fototry ny fomba fiasa ao ny vahoaka, ny zavatra manan-danja indrindra azonao atao ho am-panajana sy mahatsapa ny famantarana ny vatana. ary avy eo dia afaka manaraka ny dingana izay aho momba ny hilaza aminao. Hianatra ny Fomba Hahatakatra Ny Teny ny Vehivavy Vatana mba Mamantatra avy Hatrany Raha misy Vehivavy dia Tia Anao, Tsy lalan-kely, zara raha misy jiro, nandao fiara ny zaridaina, ny kianja, na amin’ny fiantsonan’ny fiarandalamby ambanin’ny tany efitra. Amin’ny toe-javatra ireo, ny fomba fiasa dia tsy hahomby, ary dia azonao atao mba hampitahorana ny zazavavy. Avy eo dia, tsy manao izany ao amin’ny toerana ireo, fa mifidy ny toerana tsara. Azonao atao koa ny misafidy ny momba ny fototra iray mahaliana manokana fa tsy maintsy. Ohatra, raha toa ianao toy ny tantara an-tsary, handeha ho any matetika dia ao amin’ny magazay izay mivarotra azy ireo. Raha toy ny sary hoso-doko, tamin’ny alalan’ny fampirantiana, na ny tranom-bakoka.
Amin izany fomba izany, ianao mahalala ny zavatra holazaina, ary dia azo inoana fa ianao no ho afaka hihaona sy ny fomba zazavavy iray izay ianareo. Indray mandeha catturerai ny saina, miezaka foana ny masony. Mazava ho azy, maka ny fialan-tsasatra, nahoana no manamboatra ny vehivavy iray dia afaka ny ho manohitra ny vokatra raha toa ka tsy mahalala izany. Raha miverina izy ho telo, fara fahakeliny, fotoana, misy ny tsara vintana fa izy no miahy anareo, na, fara fahakeliny, ny resaka miaraka aminao. Raha toa ka miverina ny tsiky, dia tsara iray hafa no famantarana izay mety ho liana ianao, na iza ianao manome ny fomba mandeha manatona azy. Raha vao ianao efa nanakalo ny vitsivitsy maso sy ny fara-fahakeliny ny mitsiky, hiaraka aminao, dia efa nijery ny vatana fiteny ary nampiasa ny any amin’ny lalana marina. Amin’ny ankapobeny, dia sady famantarana no hanome anao ny tsara kokoa ny fanamafisana ny liana, ary noho izany dia ny fahafantarana ny lasa noho ny fomba fisainana momba ny Tena tsy mandray ireo famantarana, dia midika izany fa izy no tsy liana ny handray anjara amin’ny resadresaka ianao ary izany dia tsy miankina amin’ny zava-misy fa ianao no teo amin’ny toerana ho an’ny daholobe, kanefa izany no zavatra raikitra. Aza miala na ho anao. Mitazona ny fitaovam-piadiana niampita. Mihaino ny mozika na ny famakiana boky.
Izany dia indrindra indrindra ny manao izany ho get lavitra anao. Amin’ity tranga ity, manaja ny zo ny ny zazavavy mba ho irery. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra. handeha ho any amin’ny dingana manaraka. ny handrava ny ranomandry amin’ny kokoa ny fiadanan-tsaina ho anareo roa: ianao dia hahita mora kokoa ny zavatra ho lazaiko, dia tsy manana ny tahotra ary izany dia ho mora kokoa dileguarti raha hanova an-tsainao. Angamba ianao no mamaky izany boky izany, na dia efa nahatsikaritra izy fa mitafy ny t-shirt-ny tarika dia toy ny. Angamba ny fiara fitateram-bahoaka dia tara ary afaka mifanakalo teny roa miaraka aminy. Na inona na inona ilay andian-teny hoe, tsy maninona. Marina fa misy ifandraisany amin’ny zavatra tena izy, ary afaka ny ho ilaina ny manatona. Raha toa tsy mihoatra liana mba miresaka, aoka ny azy irery ihany. Dia mety hampitsahatra ny fifandraisana amin’ny maso, hanome anao ny valin monosyllabic, mijery ny manodidina sy miezaka ny mandositra ny resaka miaraka aminao. Raha liana izy ity dia ho mazava tsara: izy dia hiteny ianao, dia mijery anao sy tsiky. Indray mandeha ianao dia afaka manatona ny tovovavy amin’ny vahoaka ny amin izany fomba izany, ary ianareo dia efa nametraka fa izy dia azo antoka fa liana amin’ny niresaka anao, te-dresaka. Mety mikoriana ho azy avy amin’ny fanehoan-kevitra ice-mpandika na dia mety tsy maintsy manao ny fanontaniana hafa, mandrakariva mifototra amin’ny fandinihana ny zavatra izay manana na izay ianao dia jereo ny manodidina anao. rehefa miresaka. Amin’ny fomba izany ianao dia ho afaka ny hianatra bebe kokoa momba azy, dia manana fahafahana maro mba hampiroboroboana ny fifandraisana, ary mba hanehoana aminy fa ianao no niahy azy ho toy ny olona, ary izay te-hahafantatra azy. Tamin’io fotoana io, raha tianao ianao, dia tsy ho olana raha toa ianao manana ny maro na ny fahafahana mba hitsena azy indray. Izany dia, na izany Aza, raha hoy izy: tsia, aoka handeha manontany azy ireo raha toa ka ny handeha ho an’ny kafe any ho any. Mifidy foana ny toerana ho an’ny daholobe sy ny amin izany fomba izany ianao dia ho afaka ny hahatsapa miadana sy amin’ny fanaraha-maso ny toe-draharaha. Tsarovy ny fanajana: izany no ampahany manan-danja indrindra ao amin’ny tena fomba fijery zazavavy iray imasom-bahoaka, na ao amin’ny hafa ny toe-draharaha. Ireo soso-kevitra sy ireo dingana efatra dia tsy ho sarotra ny mahazo izay tianao, ary ho afaka manatona ny ankizivavy eny imasom-bahoaka. Tadidio foana fa tsy misy na inona na inona intsony ny ara-dalàna ity, noho izany dia tsy tokony hanakana na inona na inona
← Italiana vehivavy - italiana Tovovavy - italiana Vehivavy
Fomba Hahazoana ny Zazavavy ny Finday Maro →